Dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Kulbiyoow iyo sida ay saakay xaaladdu tahay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Kulbiyoow iyo sida ay saakay xaaladdu tahay
Dagaalyahano ka tirsan Xarakada Al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar xoogan ku qaaday xero ay ciidamada Kenya ee AMISOM ku leeyihiin deegaanka Kulbiyoow ee gobolka J/hoose.
Weerarkaasi Al-shabaab oo markiisa hore ku bilaawday qaraxyo loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa markii dambe isku badelay dagaal culus oo socday muddo saacado ah.
Dagaalyahanada Al-shabaab ayaa la sheegayaa in dagaakaasi ay usoo diyaar-garoobeen, wuxuuna dagaalka u dhaxeeyay ciidamada Kenya ee AMISOM oo garab ka helaaya kuwa maamulka Jubbaland iyo dagaalayahano ka tirsan Al-shabaab.
Illaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi, balse saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dileen dagaalyahanno badan oo ka tirsan Al-shabaab.
Saraakiisha Al-shabaab weli kama hadlin dagaalkaasi ay ciidamadooda xalay ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya ee AMISOM oo ku yaalla deegaanka Kulbiyoow ee gobolka J/hoose.
Xaaladu deegaanka Kulbiyoow ayaa saakay ah mid degan, waxaana go’an dhammaan isgaarsiintii ka jirtay halkaasi.
Dhinaca kale, xiriir aynu isku daynay inaynu la sameeyno saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa inoo suurto galin.
Dhawaan ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar saf ballaaran ku qaadeen xero ciidan oo ku taalla deegaanka Kulbiyow, halkaasi oo ay Shabaabku sheegeen inay ku dileen 68 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya.